DAAWO: Axmed Madoobe oo Hanjabaad culus u diray Mucaaradka Kismaayo kusugan, kuna dhawaaqay.
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxweynaha JUbbaland Amxed Maxamed Islaam oo qabtay shir jaraaid oo soconayay ku dhawaad 30 daqiiqo ayaa markii ugu horeysay luuqad adag kaga hadlay arrimaha ku saabsan Jubbaland ee kala dhaxeeya dawladda Faderaalka Soomaaliya, isagoo soo qaaday arrimo waa weyn.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku hanjabay in ay talaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay khal-khalgaliso Ammaanka Jubbaland ay gacan adag ku qaban doonaan.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay waqti kooban bixin karaan arrimaha la xariira dulqaadka ama tanaasulka, balse wuxuu sheegay in dad badan oo ka shaqeynaya ammaan darrida deegaanadooda aysan u dulqaadan doonin.
Sidaas oo kale, mucaaradka kasoo horjeeda ayuu sheegay in aan marnaba laga yeeli doonin in ay siday doonaan uga hadlaan arrimaha ammaanka ama ay sheegtaan waxay doonaan, taasina aysan ka shaqeyneyn Jubbaland.
Hadalka adag ee Axmed Madoobe maaheyn mid horey looga bartay, balse wuxuu sheegay in ay jawaab adag oo kale bixin doonaan, haddii aysan Madaxda Dawladda Faderaalku bedelin habdhaqankooda waqtigan, taas oo noqon doonta mid ka duwan hadalka ay wali Jubbaland jeedinayso.